पुराना जीवन बीमा कम्पनी : एशियन लाइफले बढायो सबैभन्दा बढी प्रतिशत नाफा | गृहपृष्ठ
Home लगानी पुराना जीवन बीमा कम्पनी : एशियन लाइफले बढायो सबैभन्दा बढी प्रतिशत नाफा
पुराना जीवन बीमा कम्पनी : एशियन लाइफले बढायो सबैभन्दा बढी प्रतिशत नाफा
काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा पुराना ९ जीवन बीमा कम्पनीको कुल नाफा रू. १ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख २४ हजार छ । गत आवको तुलनामा चालू आवमा यी कम्पनीले नाफा १८ दशमलव ६६ प्रतिशत बढाएका हुन् ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासमा पुराना जीवन बीमा कम्पनीको कुल नाफा रू. १ अर्ब २७ करोड ५६ लाख १५ हजार थियो । जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने नयाँ १० कम्पनी थपिएसँगै प्रतिस्पर्धी बनेको बीमा बजारमा पुराना जीवन बीमा कम्पनी सबैले नाफा बढाएका छन् ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत नाफा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले बढाएको छ । कम्पनीले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा नाफा साढे ६३ प्रतिशत बढाएको हो । गत आवमा रू. ५ करोड ७१ लाख ५ हजार आम्दानी गरेको कम्पनी चालू आवमा रू. २२ करोड ६८ लाख ३४ हजार आम्दानी गर्न सफल भएको छ । गत आवभन्दा चालू आवमा कम्पनीको बीमालेख पनि थप भएको छ । गत आव २ लाख ५ हजार ३४६ बीमालेख कायम रहेकोमा चालू आवमा २ लाख ६० हजार ७७३ कायम छ । कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख २३ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । चालू आवको यसै अवधिमा रू. २ अर्ब ६४ करोड ९० लाख २६ हजार आर्जन गरेको छ ।
रकमको हिसाबमा भने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ४३ करोड ५७ लाख ८६ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीले चालू आवको सोही अवधिमा रू. ४६ करोड ७२ लाख २४ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको हो । वृद्धिदरको हिसाबले कम्पनीको नाफा सबैभन्दा कम छ । यो प्रतिशत अन्य ८ जीवन बीमा कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । गत आवभन्दा चालू आवमा कम्पनीको नाफा घटेकाले वृद्धि प्रतिशत पनि कम भएको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ८२ करोड ६५ लाख १६ हजार आम्दानी रहेको उक्त कम्पनीले चालू आवको सोही अवधिमा रू. ७० करोड ८३ लाख ४० हजार मात्र आम्दानी गरेको हो ।
पूँजीवृद्धिको अभियानमा लागिरहेका यी कम्पनीले नाफा पनि निरन्तर बढाउन ध्यान दिएको पाइन्छ । बीमा बजारका मागअनुसार नयाँ नयाँ बीमा पोलिसी लागू गर्दै कम्पनीहरू आफ्नो व्यवसायलाई नाफामुखी बनाउन सफल भएका हुन् । हालसम्म बीमा समितिले तोकेबमोजिम रू. २ अर्ब चुक्तापूँजी पु¥याउनेमा नेशनल लाइफ र नेपाल लाइफ मात्र छन् ।
Nepal L.i.cnarrsh Kumar Bhatt
नयाँ ४ जीवन बीमा कम्पनीको नाफा घट्यो
पुराना नौओटा जीवन बीमा कम्पनी : बीमालेख धितोमा साढे २२ अर्ब कर्जा प्रवाह